Usizi lwabantu abaphendukayo - i-Afrikhepri Fondation
Umqondo ojwayelekile kanye nabanye abafuna umoya sebebabonile njengabaziphindayo, izinhlobo zezilwane ezihuquzelayo, akulutho, ekuqaleni ama-humanoids abekelwa umthetho wokuphakama komoya ngokuphindukuzalwa kanye nokwenza kukaKimuntu; babenendawo yabo yokuphila esikhathini esidlule, indawo yonke ekhanyiselwe futhi bondliwe yilanga eliqhathaniswa nelethu, lapha ngezansi.
Kodwa-ke, ngokwemithetho kaMampungu, imithetho kaKimuntu, indawo yonke kumele inikezwe amandla othando akhiqizwa yilabo abahlala lapho, lokhu kuncoma isenzo sikaKimuntu ngakho-ke silalele imithetho kaKimuntu, ka uthando; uthando oluningi lukhanya endaweni yonke, kulapho ilanga elikhanyayo likhanya khona ngokwengeziwe.
Kungaleso sizathu, ilanga lapha ngezansi lizothatha ukukhombisa okunamandla ngokwengeziwe futhi lizokhanya ngokwengeziwe, kungenye yezimpawu ezibonakalayo zokuhlanzwa kweKongo dia Mbumba, umhlaba, okuyi kuyaqhubeka selokhu kwaqala lo nyaka omusha izinkulungwane ezimbili neshumi nambili.
La "reptilians", laba bafowethu beNdalo ngoba banikezwe umoya futhi ngaphambili abaxhumene noMthombo wakho konke, uNzambia Mpungu, ngomphefumulo wabo, uma sebefinyelele ezingeni elithile lokuphakama emoyeni nobuchwepheshe, amabili ahambisanayo, ephakeme kakhulu kunendlela eyake yalapha ngezansi, ngokuzumayo afuna ukungafi futhi abeka uhlelo olwaluzokuqeda ukuguquka kwenyama yokufa.
Umqondo walokhu kutholwa ukuthi nge-dint ka-anti-Kimuntu, baqeda ukucisha ilanga elondla umkhathi wabo, kwase kuba ngabo isidingo sokuthola imithombo yokudla engcupheni yokushabalala ngokusobala, emoyeni nangokwenyama.
“Eshwa” labo kodwa babeyazi indlela yokuhamba emoyeni besuka kwenye indawo baye kwenye, njengoba bebona kufanele, kuze kube yilapho bethola uKongo dia Mbumba, umhlaba, futhi bezwa lapho.
Eqinisweni, ukuze ubuphakade ababezenzele bona busebenze kubo, bekufanele babuyisele emuva umuzwa wenani, ukuthi manje badla kuphela othandweni nakulomizwa engemihle ( inzondo, ukwesaba, ukuziphindiselela, ukuziqhenya, umona ...) okumenza abe njalo; ngakho-ke bahlanganisa i-Kongo dia Mbumba, umhlaba, kepha ukuze bathathe into yokunganakwa, kwakufanele babe ngaphakathi komzimba womuntu.
Kwakumelwe zigcinwe emzimbeni wenyama negazi, ngokuzithandela noma ngenkani, noma ngubani owayezithoba kuye ethola ngokuzithandela kubo, ukubuyisana, amandla ayimfihlakalo azo zonke izinhlobo, kuyilapho lokho ababenakho amabutho ayengasengawo amakhosi kuzo zonke izimo.
Kanye emhlabeni, emakhunjini ezinkulungwane zeminyaka edlule, bathola lapho imibuthano yamandla esevele yakhelwe imimoya ekuvukeleni ngaphambi kukaNzambia Mpungu, uMdali, kanye nabamele babo, le mimoya emihlanu eyaxoshwa kuKongo dia Mbumba muva nje (Bheka “ukuhlengwa kwemiphefumulo elahlekile”).
Lokhu bakwemukele ngentokozo ngoba bonke basebenzela izinhloso ezifanayo, lezo ze-anti-Kimuntu, babamukela ngezandla ezivulekile.
Amakhulu amane namashumi amane nesishiyagalolunye, linjalo inani labasindayo bokugcina kule ndawo yonke kuze kube manje, yalabo ababefuna ukukhohlisa ukuqaphela kwemithetho kaNzambia Mpungu ngokuma emkhondweni othile wokuziphendukela kwemvelo komoya, ukuze baqhubeke beqinile kutholwe kusukela ekuqaleni kokuvela kwabo ukuza kuleli zinga; amakhulu amane namashumi amane nesishiyagalolunye, lesi yisibalo sabasindayo bokugcina okwakudingeka babe "ama-vampires", abakwazi ukungena futhi baqondise imicabango yabanye futhi baphoqelelwa ukuba bavuselele uthando olungapheli ndawo yonke lapho lukhona ukuba bondle futhi basinde ngenxa yemizwa engemihle evuswayo.
Ububi obuningi njengoba babuqongelela eminyakeni edlule, ububi obuningi kangaka obugcina bususa iningi labo, ngoba, uma umoya ungafi, usufinyelele ezingeni elithile lobubi kuwo, ugcina ubhubha impela, kunjalo nemithetho yokuziphendukela kwemvelo esemoyeni; ngokuqinisekile babezuze ubuhlakani bokuthatha umoya wabanye futhi bathathe noma yiluphi uhlobo lomzimba noma yini njengoba bebona kufanele, kodwa bazuze luphi?
Yonke into enesiphetho futhi yonke into inesikhathi sayo, kusukela izolo ebusuku la “ma-reptilians” abuyiselwe endaweni yawo yempilo, elangeni elingashoni, lapho imvilophana yenyama negazi lahlala futhi lapho lingasenakho okunye okunye okuhlukile kunokuzithoba kuKimuntu, ukukhuphuka futhi izitebhisi, zonke izinyathelo, zokuphakama komoya osengozini, kungenjalo, ukufa ngokuqinisekile futhi abanakho okunye ukuvulwa okuzobuya lapha ngezansi, njengoba benekhono kuze kube manje.
Kodwa-ke, akufanele zibhidaniswe namaqembu e-Freemason, i-Illuminati kanye namanye amaqembu ase- jpg, wonke angabahlali bomhlaba agqilaziwe ezikhungweni ezivela ngamasu wemimoya emihlanu exoshwe kuKongo dia Mbumba eminyakeni embalwa edlule futhi ebesebenza ngayo amathuluzi amandla.
Ngokuxoshwa kwalabo okubizwa ngokuthi ngabantu abaphindayo, ukuhlanzwa komhlaba kusuka kuyo yonke imithombo yangaphandle ye-anti-Kimuntu lapha ngezansi kuyaphela, akusekho okusasele lapho, ngaphandle kwalokho okusekuyilokho kulabo ababenenkontileka yembewu u-anti-Kimuntu futhi washada no-matrix obaphethe, labo okufanele babuyele ku-Kimuntu, basengozini yokuhlanzwa kusuka ngezansi bona.
ULuzolo Menga Ma Kongo
Ukubuka Okuthelelekile (2010)
Isifo Sokubuka (2013)